Ny Asa Sosialy eto Ambavahadimitafo (ASAM) – FJKM Ambavahadimitafo Ny Asa Sosialy eto Ambavahadimitafo (ASAM) |
Ny Asa Sosialy eto Ambavahadimitafo (ASAM)
Publié le 14 juin 2007 à 01:06
Tsy nataon’ny apôstôly Paoly ambanin-javatra ny fanampiana ireo sahirana ka nanafarany ny Fiangonana tany Korinto
I KORINTIANA 16:1,2 SY II KORINTIANA 9:12, 13
A. FANAMPIANA NY SAHIRANA
Ny Soratra Masina no iorenan’ny fandaminana ao amin’ny Fiangonana « réformé », ary anisan’izany ny FJKM. Mibahan-toerana lehibe amin’izany ny fampianaran’ny apôstôly Paoly. Tsy nataon’ny apôstôly Paoly ambanin-javatra ny fanampiana ireo sahirana ka nanafarany ny Fiangonana tany Korinto, ary mbola manan-kery sy atao ho an’ny Fiangonana Ambavahadimitafo koa izany hafatra izany, ka nitenenany hoe :
« .. araka ireo fepetra nasaiko narahin’ny Fiangonana rehetra any Galilia. Isan’Alahady dia samia mba manokana vola ao aminy » (I KORINTIANA 16:1,2 – DIEM)
Ny fampianarana sintonintsika avy amin’io dia ity : Tsy diso mihitsy ny mpiangona eto Ambavahadimitafo, raha manangom-bola isaky ny Alahady (rakitra moa no hilazana azy ao amin’ny dikan-teny teo aloha) entina hanampiana ireo sahirana. Satria araka ny Soratra Masina izany. Ary entanina mihitsy aza ny mpiangona mba hanao izany. Io fanangonam-bola io dia tsy hoe faniriana fotsiny, ho an’ny apôstôly Paoly, mba ho ataon’ny mpiangona, fa faniriana miendrika baiko, satria hoy izy :
» mba manaova koa ianareo, araka ireo fepetra nasaiko narahin’ny Fiangonana rehetra »
Natao ho an’ny Fiangonana Ambavahadimitafo koa izany fepetra asain’ny apôstôly Paoly arahina izany; « manokana vola » hoy izy.
B. FITORIANA NY FILAZANTSARA
Zava-dehibe ny fanampiana ny sahirana, ka nahatonga ny apôstôly Paoly hampianatra ny Fiangonana, ary anisan’izany isika eto Ambavahadimitafo, hanangom-bola ho an’izany asa fiantrana izany. Ary ireo sahirana ireo, dia tsy voatery mihitsy hoe ao anatin’ilay Fiangonana mpanome, satria : nampanangom-bola ny Fiangonana any Korinto, ny apôstôly Paoly, ho an’ny Fiangonana any Jerosalema (I Kor. 16:3) na koa ho an’ny Fiangonana any Jodea (II Kor. 9:12) sns.
Fiangonana izay samy sahirana avokoa. Fitoriana ny Filazantsara, fitoriana an’Andriamanitra, ny fanampiana ny sahirana, araka ny tenin’ny apôstôly Paoly hoe :
« Satria ny fanaovana izao asa famoriam-bola izao dia tsy hoe mahafa-pahasahiranana ny vahoakan’Andriamanitra any Jodea fotsiny, fa mahabe ny fisaoran’ny maro an’Andriamanitra koa. Misy vidiny tokoa izao fanasoavana izao, Ka maro koa no hanome voninahitra an’Andriamanitra noho ny fanaovana anehoanareo ny Vaovao Mahafaly nentin’i Kristy ; maro koa no hanome voninahitra an’Andriamanitra noho ianareo nahafoy be nizara harena tamin-dry zareo any Jodea sy tamin’ny olona rehetra » (II Kor. 9:12, 13 , DIEM)
Ny fampianarana sintonintsika avy amin’ireo andalan-tSoratra Masina ireo dia ireto :
a) Tena manampy ireo sahirana tokoa, ny fanomezanareo ho azy ireo, koa manantena, mamporisika ny Fiangonana izahay ASAM ny hanohy, ny hampitombo ny zavatra efa fanaonareo ihany. Fitiavana izany.
b) Tsy vitan’izany ihany fa : Ny fanampiana ireo sahirana, dia mahatonga ny betsaka hisaotra an’Andriamanitra (II Kor. 9:12), izany hoe hivavaka. Misy tokoa mantsy ny vavaka fisaorana, fa tsy izany ihany no antony hivavahana. Ary ao koa ireo maro hanome voninahitra an’Andriamanitra noho ianareo nahafoy be nizara harena tamin-dry zareo.
Araka ny fijoroan’ny apôstôly Paoly vavolombelona eto, sy fampianarana ampitainy amintsika dia : ireo koa no anisan’ny vokatry ny fanampianareo ireo sahirana, vokatra izay tena mankadiry tokoa. Tsy vitan’ny hoe manala fahasahiranana an’ireo sahirana ianareo, fa mahatonga ny maro koa hisaotra sy hanome voninahitra an’Andriamanitra. Fitoriana an’Andriamanitra tokoa ny fanampiana ny sahirana.
Betsaka aminareo no tsy manana ny fahasoavana hitory an’i Jesoa Kristy amin’ny alalan’ny fitetezana tokantrano (« Tafika Masina » no iantsoan’Ambavahadimitafo an’izany), na koa amin’ny alalan’ny toriteny na koa amin’ny alalan’ny fomba maro samihafa. Kanefa betsaka aminareo koa no manana fahasoavana hitory an’i Jesoa Kristy amin’ny alalan’ny fanampiana ireo sahirana, anisan’izany ny ara-bola.Tena fomba fitory iray hafa koa ny fanomezanareo vola ho amin’izany. Koa mazotoa mitory tompoko.
Isika eto amin’ny fitandremana Ambavahadimitafo dia manana ny ASAM, izay vondron’asa mampita fotsiny ny fanomezanareo, ny fanampianareo ho any amin’ireo sahirana. Tetezana fotsiny ihany ny ASAM, tetezana mampita ny fitorianareo (fanampiana) amin’ireo toriana (sahirana). Ianareo mitory, fa ny ASAM dia fitaovana entina mampita ny fitorianareo fotsiny ihany. Izany hoe, ianareo no miteny, fa ny ASAM dia « micro » fotsiny ihany.
Amin’ny Alahady 21 Mey 2006, Alahady fahatelon’ny volana, no Alahady natokan’ny fiangonantsika eto Ambavahadimitafo ho Alahadin’ny asa sosialy, Alahadin’ny ASAM. Koa manantena anareo ny fiangonantsika fa :
« Momba ny famoriam-bola atao ho an’ny vahoakan’Andriamanitra any Jerosalema, dia izao : mba manaova koa ianareo, arak’ireo fepetra nasaiko narahin’ny Fiangonana rehetra any Galilia. Isan’Alahady dia samia mba manokana vola ao aminy avy arakaraka izay vola miditra ka hitahiry izany, mba tsy ilaina intsony ny hamoriam-bola amin’ny fahatongavako (I Kor. 16:1, 2, DIEM) ;
« Satria ny fanaovana izao asa famoriam-bola izao dia tsy hoe mahafa-pahasahiranana ny vahoakan’Andriamanitra any Jodea fotsiny, fa mahabe ny fisaoran’ny maro an’Andriamanitra koa. Misy vidiny tokoa izao fanasoavana izao, ka maro koa no hanome voninahitra an’Andriamanitra noho ny fanaovana anehoanareo fa inoanareo ny Vaovao Mahafaly nentin’i Kristy ; maro koa no hanome voninahitra an’Andriamanitra noho ianareo nahafoy be nizara harena tamin-dry zareo any Jodea sy tamin’ny olona rehetra » (II Kor. 9:12, 13 – DIEM)